Video Ihe Ntụgharị Pro, n'efu maka obere oge na Mac App Store | Esi m mac
Video Ihe Ntụgharị Pro, n'efu maka obere oge na Mac App Store
Taa, ewetara m gị onyinye a na - apụghị ịgbagha agbagha nke ị na - agaghị echefu. Ọ bụrụ na ịnweghị video Ntụgharị gị Mac, nke a bụ ohere iji nweta ngwa ọrụ zuru oke ma dị ike maka ya. Ọ bụ ihe Video Ihe Ntụgharị Pro, a na-akwụ ụgwọ na ngwa na ị nwere ike ugbu a na-kpam kpam free na nke ị nwere ike tọghata gị videos n'etiti enweghi ngwụcha ọnụ ọgụgụ nke formats na-egwu na iTunes na na ọkacha mmasị gị na ngwaọrụ dị ka iPad ma ọ bụ iPhone, na ọbụna wepụ ọdịyo.
Video Ihe Ntụgharị Pro ọ nwere ọnụahịa mbụ nke euro 49,99; Ọ na-belatara 19,99 euro na ugbu a, ọ bụ kpam kpam free. Cheta na onyinye a bụ maka obere oge ma anyị amaghị mgbe ọ ga-alaghachi na ọnụahịa ya gara aga, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ntụgharị vidiyo maka Mac gị, mee ọsọ ọsọ ma budata n'efu Video Ihe Ntụgharị Pro ugbu a. Naanị anyị nwere ike ịkwado na onyinye ahụ dị ugbu a n'oge ibipụta post a.
1 Tọghata videos gị na usoro ịchọrọ, yana n'efu
1.1 Usoro ntinye na mbupute nke Video Converter Pro na-akwado
Tọghata videos gị na usoro ịchọrọ, yana n'efu
The Mac App Store jupụtara ngwa onye ozi bụ iji tọghata video faịlụ n'etiti dị iche iche formats; Ọzọkwa na-abụghị nke ndị ọrụ ukara Apple ngwa ụlọ ahịa anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ. N'ezie, ọ bụghị oge mbụ anyị nwere onyinye yiri nke a na Soy de Mac OS, ọ gaghịkwa abụ nke ikpeazụ. Mana ọ bụrụ na, achọrọ m ka ị jiri nkwalite nke taa, anyị amaghị ruo mgbe ọ ga-adị ire.
Mepụtara site na ụlọ ọrụ Aiseesoft, yana Video Ihe Ntụgharị Pro tọghata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụla video faịlụ nke ọ bụla usoro na usoro ị chọrọ iji tinye ya na ọba akwụkwọ iTunes gị ma ọ bụ kpọọ ya na ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụrụ iPhone, iPod touch, iPad ma ọ bụ smartphones na mbadamba sitere na ụlọ ọrụ ọ bụla.
I nwekwara ike wepụ audio si video tinye ya dị ka egwu track gị n'ọbá akwụkwọ na ọbụna dezie nsonaazụ mmepụtadị ka nchapụta, saturation, olu, hue ma ọ bụ ọdịiche, ọnụego etiti, ọnụego ọdịyo ...
Video Ihe Ntụgharị Pro bụ ihe ntụgharị vidiyo kachasị mma na kachasị ọsọ na-enyere gị aka ịgbanwe ihe ọ bụla 4K & HD & SD vidiyo na faịlụ ọdịyo na ọsọ ọsọ ọsọ na oke efu efu. Ọ bụkwa a video nchịkọta akụkọ na-enye gị ohere ịgbanwe video mmetụta na dezie video dị ka-amasị gị. Ọzọkwa ị nwere ike họrọ iji tọghata video ka MP4 / MOV / AVI / MP3 na dezie ya na ndị ọzọ video nchịkọta akụkọ software.
Usoro ntinye na mbupute nke akwadoro Video Ihe Ntụgharị Pro
Ntinye vidiyo: 4K (MP4, MKV, AVI, TS, FLV, WEBMS), faịlụ QuickTime (* .qt; *. Mov), MPEG4 (* .mp4; * .m4v), MXF (* .mxf), AVCHD Video (* .Mts, * .m2ts, * .tod, * .mod), 3GP (* .3gp; *. 3g2), AVI, DV faịlụ (* .dv; * .dif), Flash Video Files (* .flv; *. MPEG (* .mjpg; * .mjpeg), MPV, Real Media Files (* .rm), MPEG (* .mp4), MKV, WTV, MPEG Windows Media faịlụ (* .wmv; * .asf), faịlụ HD MPEG2, HD MPEG4 faịlụ, HD QuickTime faịlụ, WMV HD vidiyo vidiyo (* .wmv), HD TS, HD MTS, HD M2TS, HD TRP, HD TP, HD MXF.
Mmepụta vidiyo: Video AVI, H.264 / MPEG-4 Video AVC, M4V Video MPEG-4, MKV, MOV, MPEG-1 Video AVI, H.264 / AVI MPEG-4 Video MPEG-2, Video MPEG-4, Television Music , WMV, XviD, DV, WebM, DivX HD Video, HD ASF Video, HD AVI Video, HD H.264 / MPEG-4 AVC Video, HD MKV Video, HD MPEG-4 Video, HD MPEG-4 Video, Video HD MPEG-4, HD VOB vidiyo, HD WMV vidiyo, MPEG2-PS HD vidiyo, HD MPEG2-TS vidiyo, HD H.264 vidiyo, XviD HD vidiyo, HD MP4 Video, HD WebM
Ntinye ntị: AAC, AIFF, CUE, FLAC, M4A, MPEG Audio Files, Enwe Audio Files, Real Audio faịlụ, SUN AU Audio Files, WAV, WMA
Mmepụta ọdịyo: AAC, AC3, AIFF, AMR, AU, FLAC, M4A, MKA, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA
Don't gaghị agbaghara ohere iji nweta a free video nchịkọta akụkọ na Ntụgharị, ma mee ngwa ngwa, na-enye bụ n'ihi na a obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Video Ihe Ntụgharị Pro, n'efu maka obere oge na Mac App Store
Egwuregwu Tiburon Attack 3D na-abịa na Mac App Store
Na-arụ ọrụ dị ka otu ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ngwa Apple